न्युयोर्कमा विष्णुको मृ’त्यु, न कसैले श्र’द्धाञ्जली दिए न त कसैले उनको मृ’त्युबारे सोधीखोजी नै गरे ! – Life Nepali
न्युयोर्कमा विष्णुको मृ’त्यु, न कसैले श्र’द्धाञ्जली दिए न त कसैले उनको मृ’त्युबारे सोधीखोजी नै गरे !
न्युयोर्क. न्युयोर्कमा नेपालीको एउटा मृ’त्यु जो कसैले पनि वा’स्ता गरेका छैनन् । न उनको नाममा कसैका फेसबुकमा श्र’द्धाञ्जली देखियो न त उनको मृ’त्युबारे कसैले सो’धीखोजी नै गरे ।मार्च २७ मा न्युयोर्कको एल्महस्र्ट अस्पतालमा एकजना राई थरका व्यक्ति विते । तर उनको मृ’त्युबारे न्युयोर्कको नेपाली स’मुदायले पत्तो पाएन । खसोखासले भने उनको मृ’त्युबारे अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।झण्डै २ सातासम्मको अनुसन्धानपछि गत विहिबार पत्तो लाग्यो, मार्च २७ मा एल्महस्र्ट अस्पतालमा बितेका व्यक्ति रहेछन् बिष्णुकुमार राई ।
ए’ल्महस्र्टको ब्रो’डवे डा’यलासिस सेन्टरका अनुशार राईले सन् २०१२ को मार्च देखि नै उक्त डा’यलासिस सेन्टरमा डा’यलासिस गराउँदै आएका थिए । सन् २०१२ को मार्च २२ देखि उक्त सेन्टरमा राईको डा’यलासिस सुरु गरिएको प्राप्त कागजातमा उल्लेख छ ।उनले हरेक मंगलबार, बिहिबार र शनिबारगरी हप्तामा तीनपटक डा’यलासिस गराउँदै आएका थिए । एकपटकको डा’यलासिसमा ४ घण्टा लाग्ने गरेको ब्रो’डवे डा’यलासिस सेन्टरले जनाएको छ । कागजातमा उल्लेख भए अनुशार उनमा नि’को नहुने प्रकारको क्रो’निक स्वास्थ्य अवस्था रहेको थियो ।
उनले बेलाबेलामा र’क्तश्राव, बा’न्ता, कमजोरी, रिं’गटा लाग्ने लगायतका स’मस्याहरु समेत भोग्दै आएका थिए । हो’मलेस सेल्टरमा बस्ने क्रममा उनी बि’रामी भएर अस्पतालमा भ’र्ना भएर फर्कदा उनका सामानहरु ’मिल्काइने लगायतका समस्या उनले भोग्दै आएका थिए ।उनले आफ्ना कुनै परिवारका सदस्यहरु नरहेको बताउँदै आएका थिए । टी’पीएसभन्दा अगाडि उनको जीवन अत्यन्तै द’र्दनाक रहेकोमा टी’पीएस पाइसकेपछि भने उनले नर्सिङ होम पाएका कारण केही स’हज भएको थियो ।बाँ’च्नका लागि लागि लामो समयदेखि सं’घर्ष गर्दै आएका उनको स्वास्थ्य अवस्था अ’त्यन्तै क’मजोर रहेका कारण र उनी मु’टुको समेत रो’गी भएका कारण उनी को’रोनासँग भने जु’ध्न सकेनन् ।
Previous आफ्ना दुई नागरिक लिन भुटानबाट नेपाल आयो चार्टर जहाज
Next विदेशबाट फर्केका युवालाई देशमै रोजगारी दिने सरकारको तयारी
पहिलो पटक कोरोना भ्या’क्सिनको विकासमा रुसले मा’र्‍यो बा’जी ! अहिले सम्मका सबै ट्रा’यल सफल !